September 2019 – Swel Sone News
နောက်ထပ်ထွက်ရှိမယ့် သီချင်းအသစ်လေးကို နှစ်ယောက်အတူဆိုပြလိုက်တဲ့ ရွှေနှစ်ရွှေရဲ့ ဗီဒီယို
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် နိုင်ငံကျော် ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တဲ့ ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံရတီက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နွေးထွေးမှုတွေအပြည့်နဲ့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံရတီက အနုပညာလျှောက်လမ်း ကိုယ်စီမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေတာဖြစ်ပြီး ထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့ ကြယ်လေးတွေဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ရွှေနှစ်ရွှေက အခုဆိုရင် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို မအားမလပ်အောင် လုပ်ကိုင်နေပြီး သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကိုလည်း သာယာဖွယ်ဖြစ်အောင် တည်ထောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံရတီတို့ နှစ်ယောက် သီဆိုထားတဲ့ “အမှား” သီချင်းက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဟုန်းဟုန်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ပရိသတ်တွေက ရွှေနှစ်ရွှေရဲ့ သီချင်းအသစ်တွေကို မျှော်လင့်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းမှာတော့ ရွှေနှစ်ရွှေက သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိမယ့် သီချင်းအသစ်လေးကို Live လွှင့်ပြီး အမြည်းလေး ဆိုပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံရတီတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို...
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ခုခေတ်မှာ ယောကျာ်းလေးကနေ မိန်းကလေးဘဝကို လိုချင်သူတွေအတွက် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာကြောင့် ပြောင်းလဲသူတွေလည်း ရှိနေပါပြီနော်။မြန်မာနိုင်ငံက လေဒီဘွိုင်း တွေထဲမှာ မိန်းကလေးဘဝသို့ အပြီးပြောင်းလဲလိုက်တဲ့သူတွေလည်း ရှိနေပြီလို့ ဆိုရမှာ ပါ။ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ လေဒီဘွိုင်းတွေထဲမှာ မေသစ္စာမောင် လည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ပါပဲ။ မေသစ္စာမောင် ဟာ ညို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလှကြောင့် Miss တစ်ဦးဖြစ်သလို ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို ရရှိထားကာ အနုပညာအလုပ်တွေ ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေပါသေးတယ်။ မေသစ္စာမောင် ကတော့ လှပတဲ့မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိမ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ကာ စက်တင်ဘာလ(၁၅)ရက်နေ့ မှာ ဘန်ကောက်မှာ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရမ်းကိုနာကျင်ခက်ခဲလှတဲ့ ခံစားမှုတွေကို ချုပ်ရိုးဆေးထည်တဲ့အချိန်တွေမှာ ခံစားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး ချုပ်ရိုးဖြည်ရချိန်မှာတော့ မေသစ္စာမောင် ဟာ ထပ်မံပြီး နောက်ထပ် (၅)ချက်ထပ်ချုပ်လိုက်ရတာကြောင့် အရမ်းနာကျင်ခံစားရကြောင်းကို ” ဒီနေ့ပဲချုပ်ရိုးဖြည်တယ်။ နာက်ထပ်၅ချက်ထပ်ချုပ်လိုက်ရတဲ့ဖီလင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ” ဆိုကာ...
ဓာတ်​ပုံဆရာတစ်​ဦး ထုတ်​​ပြောလိုက်​တဲ့ လက်​​တွေ့ဘဝထဲက မင်းသမီး ​သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့အ​ကြောင်း
ပရိသတ်​​တွေအရမ်းချစ်​ကြတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​က​တော့ သူမကိုယ်​သူမ အမြဲ ယုံကြည်​မှုရှိပြီး တက်​ကြွလန်းဆန်း​နေတတ်​ပြီး စိတ်​ထားလည်း ​ကောင်းလွန်းသူ​လေး တစ်​ဦးပါ။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ဓာတ်​ပုံဆရာတစ်​ဦးက ဖန်သားပြင် ​​အပြင်ဘက်​က သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့အ​ကြောင်းတစ်​ခုကို ထုတ်​​ပြောလာတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ အဆိုပါဓာတ်​ပုံဆရာ ​ပြောပြတဲ့ ပုံစံအရဆိုရင်​​တော့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​က ဘာသာတရားလည်း ကိုင်းရှိုင်းပြီး နူးညံ့သိမ်​​မွေ့တဲ့သူတစ်​ဦးဆိုတာ သိနိုင်​ပါတယ်​​နော်​။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ဓာတ်​ပုံဆရာ ​နေမင်းထွန်းက​ ချစ်​လွန်းလို့ဆိုပြီး အ​နောက်​က​နေ ခိုးရိုက်​ထားတဲ့ သင်​​ဇာဝင့်​​ကျော်​ရဲ့ ဗီဒီယို​လေးကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ ဓာတ်​ပုံဆရာ ​နေမင်းထွန်းက​တော့ “သင်ဇာ့ကို ချစ်တာ အ့ကြောင့်လဲပါတယ် သင်ဇာနဲ့ ကိုနေ ခရီးတွေ သွားခဲ့တာ မနည်းတော့ဘူး ကိုနေကြည့်နေတာ ခရီးတခုမသွားခင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အပြန်ခရီးဖြစ်ဖြစ် သူလေးနဲ့ အမြဲတမ်းခရီးအတူသွားတိုင်း ခုလိုတွေ ဘုရားစာတွေကို အမြဲ သူရွတ်ဖတ်နေတတ်တယ်ခုတော့ ကိုနေ ချစ်လွန်းလို့ ဒီ videoလေးကို တင်လိုက်ပါတယ် သင်ဇာ့ရဲ့...
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် Justin Bieber တစ်ယောက် ချစ်ရတဲ့ ဇနီးသည် Hailey Badwin နဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီး ကျင်းပဖို့အတွက် အကြိုမင်္ဂလာပွဲလေး ပြုလုပ်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသတင်းကတော့ နိုင်ငံတကာက မီဒီယာတွေကြားမှာ အရမ်းကို ဟော့ဖြစ်နေပြီး၊ ပရိသတ်တွေကလည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ Justin Bieber တို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ လက်ထပ်လက်မှတ်ထိုးထားတာ ကြာနေပြီဆိုပေမယ့် အခုမှ သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းကို လူသိရှင်ကြား ကျင်းပခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော် Justin Bieber နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Hailey Bieber တို့နှစ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာအကြို ညစာစားပွဲက ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အဆိုတော် Justin Bieber နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Hailey Bieber တို့နှစ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာအကြို ညစာစားပွဲကိုတော့ စက်တင်ဘာလ...
လတ်တလော လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူငယ်အဆိုတော် အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Eternal Gosh အဖွဲ့ကတော့ လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အကြိုက်ကို ထိထိမိမိချပြနိုင်တာမို့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Eternal Gosh အဖွဲ့ရဲ့ အဆိုတော် ဟန်နေတာကလည်း သူ့ရဲ့အနုပညာ Talent ကြောင့်ရော ကြည့်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့်ပါ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ သဲသဲလှုပ်ဝန်းရံနေကြတာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ဟန်နေတာက ဝေဖန်သံတွေ ဆူညံနေတဲ့ ဟိုတယ်အခန်းထဲက သူ့ရဲ့ပုံလေးတစ်ပုံအကြောင်း ထုတ်ရှင်းလိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အရှည်ကြီးမရှင်းပြပဲ တိုတိုနဲ့ထိထိမိမိ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဟန်နေတာကတော့ တကယ့်ကို ပညာသားပါလှပါတယ်နော်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် အရမ်းကို ပညာသားပါတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ပရိသတ်တွေသိအောင် ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ဟန်နေတာရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဟန်နေတာကတော့ အဆိုပါပုံလေးကို “ဒီနေ့ညနေ ၄း၀၀ မန္တလေး Central Point Shopping Centre မှာ Tuborg ကလုပ်တဲ့ Global...
ပရိသတ်တွေ ချစ်ကြတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲလေး တစ်တွဲဖြစ်တဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer က တူညီတဲ့ အနုပညာလမ်းပေါ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer ဟာ နှစ်ယောက်စလုံး မအောင်မြင်ကြသေးခင်ဘဝကတည်းက အတူတူကြိုးစားလာခဲ့တာ အခုချိန်ထိ အေးးအတူ ပူအမျှနဲ့ လက်တွဲမဖြုတ်ပဲ ချစ်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလဲ အေးချမ်းပြီး တည်ငြိမ်လွန်းတဲ့ သူတို့စုံတွဲလေးကို ချစ်ခင်အားပေးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးချစ်တဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer တို့အတွဲလေးက မနေ့က စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရ့က်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ Juction City မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ “KISS ME” Cosmetic Brand ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ လွှမ်းပိုင်နဲ့ Bobby Soxer တို့က လူငယ်ဆန်ဆန် အဖြူ၊ အမည်း ဖက်ရှင်လေးတွေနဲ့...
စက်တင်ဘာ(၂၉) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သူမရဲ့ မွေးနေ့ကို အလှူအတန်းတွေ များစွာ ပြုလုပ်ရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ညပိုင်းမှာတော့ မိသားစုလေးနဲ့ Birthday Party လေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ခင်ပွန်းက လှူချင်တဲ့နေရာတွေ အကုန်လုံးကို စီစဉ်ပေးတယ်တဲ့။ သရုပ်ဆောင် ချောရတနာကတော့ မွေးနေ့မှာ သူမလှူချင်တဲ့ နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းခွင့်ရလို့ ပျော်လို့နေပါတယ်။သူမလှူချင်တဲ့ နေရာတွေကိုလည်း မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကတည်းက ဆက်တိုက်ဆိုသလို လှူဒါန်းခွင့်ရအောင် စီစဉ်ပေးတဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့်လည်း ချောရတနာတစ်ယောက် ပီတိဖြစ်လို့နေပါတယ်။ “မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကိုတောက်လျှောက် ကိုယ်လှူချင်တာတွေသွားချင်တာတွေ အကုန်စီစဉ်ပေးခဲ့တယ် စပရိုက်မတိုက်တတ်တာမရိုတတ်တာလေးတစ်ခုပဲ ကျေးကျေးပါကျားကျား” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ စက်တင်ဘာ(၂၉) ရက်နေ့က ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သူမမွေးနေ့မှာ လိုအပ်တွေနေရာတွေမှာ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့သလို ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံမှာလည်း သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ချောရတနာကတော့ လက်ရှိမှာ မိသားစုကို အချိန်ပေးဖြစ်နေပြီး သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် gym ဆော့နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတွက်လည်း သိသိသာသာ...
မျက်စိတစ်ဆုံးကျယ်တဲ့ လာဗန်ဒါပန်းခင်းကြီးထဲမှာ သတို့သမီးဝတ်စုံလေးနဲ့ လှနေတဲ့ ခင်လေးနွယ်
ခင်လေးနွယ်ကတော့ လီဆူးတိုင်းရင်းသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လှပအချိုးကျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်ပါ။ ခင်လေးနွယ်က အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိလာတဲ့နောက်မှာတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေထက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာ ပိုမိုပြီး အာရုံစိုက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လေးနွယ်ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို သိပ်မမြင်ရတော့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ သူမကို ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ အားပေးနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ခင်လေးနွယ်က မျက်စိတစ်ဆုံး ကျယ်ပြောပြီး အရမ်းလှတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ Mayfield Lavender Farm မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ သူမရဲ့ ပုံလှလှလေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဝေမျှထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ခင်လေးနွယ်က Lavender ပန်းခင်းကြီးထဲမှာ ခရမ်းဖျော့ရောင် သတို့သမီးဝတ်စုံလေးနဲ့ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်ထဲက နတ်သမီးလေးတစ်ပါးလို လှပနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ခင်လေးနွယ်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ ဟန်နေတာရဲ့ အိပ်ယာပေါ်က ခြေထောက် ပိုင်ရှင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူငယ် Rock Band တွေထဲမှာ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေတတ်တဲ့ Eternal Goshအဖွဲ့ကိုတော့ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ Eternal Gosh အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုရှင် ဟန်နေတာကလည်း ချောမောပြပြစ်ပြီး ယောကျာ်းဆန်တဲ့ စတိုင်လ်ကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးခြင်းကို ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှတော့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ပွဲဆူနေတဲ့ ဟန်နေတာအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညက ဟန်နေတာ တင်လိုက်တဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ သို့လော သို့လောနဲ့ အထင်မှားစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကလဲ ထင်ကြေးအမျိုးမျိုးပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်နေတာက “ဒီနေ့ညနေ ၄း၀၀ မန္တလေး Central Point Shopping Centre မှာ Tuborg ကလုပ်တဲ့ Global Beer Responsibility Day ပွဲမှာ ကျွန်တော်ရှိပါမယ် 😈” ဆိုပြီးပုံလေးတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်နေတာရဲ့ ပုံထဲမှာ ကုတင်ပေါ်မှာ...
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မညီညွတ်ခြင်းတွေကြောင့် မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေဟာ ဘဝ မလှဖြစ်ကြရရှာပါတယ်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု နဲ့ အလုပ်အကို ရှားပါးမှုတွေကြောင့်လည်း ကလေးတော်တေ်ာများများဟာ ကျောင်းထဲမှာ ရှိရမယ့်အစား လမ်းပေါ်မှာ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ရရာနေရာမှာ ရသလို စီးပွားရှာနေကြရတာ အရွယ်နဲ့မမျှအောင်ပါပဲ။ ဒါကိုလည်း အားလုံးတွေ့ဖူးမြင်ဖူးကြမှာပါ..။ အခုတစ်ခါ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက လူမှုကွန်ရက်ပေါ်က အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတေ့ာ့ ဂျေလှသင်ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်က မျှဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်ကပန်းကလေး ချစ်လိုက်တာ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရင်ထီထိုးမယ် ဆိုတော့ ရိုက်ပါအန်တီ ရိုက်ပါ သားဆီမှာထီထိုးပါတဲ့….သူရွေးပေးတဲ့ ၁ဝစောင်တွဲယူတော့ ဖုန်းနံပါတ်ရေးတယ်…. လက်ရေးက ခနော်ခနဲ့ ဘယ်နှတန်းအထိကျောင်းနေဖူးသတုံးဆိုတော့ ၅တန်းနဲ့ကျောင်းထွက်လိုက်ရတာ တဲ့…. တိုိ့တိုင်းပြည်က မဖူးခင်ကြွေရတဲ့ပန်းတွေ သူထီရောင်းနေတဲ့လမ်းက စာသင်ကျောင်းနဲ့ကပ်လျက် စာသင်ခန်းထဲက စာအံသံတွေ လမ်းမကကြားနေရတယ် ကလေးရယ်….. သူလည်း ကျောင်းနေချင်ရှာမှာပဲ ……အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေစာသင်ခန်းထဲမရှိပဲ လမ်းပေါ်မှာရှာဖွေစားနေရတာမြင်ရရင်လေ အလိုလိုရင်ထဲမှာမကောင်းတော့ဘူး…....